Haalota gingilchaa hedduu buuliyaanii OR walindhuuf , kabala gingilchaa irraa sajooNaanna'iinsa gingilchaa cuqaasi. Foddaan Naannessaa gingilchaa ni mul'ata.
Haala gingilchaa Gingilchaa naanna'aa harkisuu fi kaawuudhaan, yookan furtuulee fayyadamuun siqsuu ni dandeessa AjajaCtrl+Alt+Up Arrow or AjajaCtrl+Alt+Xiyya Gadee. Haala gingilchaa garagalchuuf, furtuu yommuu AjajaCtrl gadi isaan qabdu harkisi.
Title is: Naannessaa Gingilchaa Fayyadamuu